Nayakhabar.com: रियो ओलम्पिकमा मैदानमै इन्गेजमेन्ट, को हुन यी जोडी ?
रियो ओलम्पिकमा मैदानमै इन्गेजमेन्ट, को हुन यी जोडी ?
काठमाडौं । अहिले रियो ओलम्पिकको प्रत्येक क्षण रोमाञ्चक बन्दै गएको छ । पदकको आशा गरेकाहरूले निराशा भोगिरहेका छन् भने पदकको आशा नगरेकाहरूले पदक जितिरहेका छन् । कसैले नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् भने कसैले रोमाञ्चक क्षणहरू सिर्जना गरिरहेका छन् ।
रियो ओलम्पिकको आयोजक ब्राजिलको महिला रग्बी टिमले नवौं स्थानमा चित्त बुझायो । उक्त क्षण ब्राजिलियन रग्वी टिमका लागि जति दुखद् थियो त्योभन्दा रोचक बन्न पुग्यो महिला रग्बी टिमकी सदस्य इसाडोरा सेरुलोलाई अकस्मात रग्बीमा पराजय भोगेको स्टेडियम डियोडोराकी म्यानेजर माजोरी इन्याले विवाहको प्रस्ताव राखिन् । उनीहरूले रंगशालाको मैदानमै औंठी लगाइ चुम्बन साटासाट गरेर इन्गेजमेन्ट गरे । इसाडोरा र माजोरी विगत दुई वर्षदेखि प्रेममा थिए ।
माजोरीले आफ्नो विवाहलाई रोचक बनाउन पनि ओलम्पिक कुरेर बसेको बताईन् । २५ वर्षीया इसाडोरा अमेरिकी नागरिकताधारी भए पनि विगत दुई वर्षदेखि साओपाउलोमा बस्दै आएकी छिन् भने २८ वर्षीया माजोरी इसाडोरालाई आफ्नी गर्लफ्रेण्ड मान्छिन् ।